Warbixin Bileedka Bisha September (2017) Ee Xoolaha Nool
Bishii lasoo dhaafay ee September, 2017, halka neef ee geela ah waxaa celcelis ahaan la iibinayay 29,446,000 So.Sh halka bishii lasoo dhaafay ee August la iibiniyay 32,919,000 So.Sh. Sidaa darteed qiimaha geela ee bishii lasoo dhaafay waxa uu hoos u dhacay 3,452,000 So.Sh.
1’dii bisha iyo Todobada maalin ee ku xigtayba neefka geela ah ayaa la iibinayay 30,000,000 So.Sh, halka Sideeddii bisha uu noqday 29,000,000 So.Sh oo macnaheedu tahay in qiimaha neefka geela ah uu hoos u dhacay 1,000,000 So.Sh. Balse wixii ka dambeeyay 15’kii bisha qiimaha neefka geela ah sare ayuu u kacay waxuuna ku noqday halkii uu ka yimid 30,000,000 So.Sh. September 22 neefka geella ah hoos ayuu u laabtay waxuuna ku noqday qiimahii ahaa 29,000,000 So.Sh isla qiimahaas ayaa la iibinayay illaa bisha ay ka dhamaato.
Bishii September ee 2017 qiimaha lagu iibiyo neefka lo’da ah ee dalka ayaa ku bilawday 7,500,000 So.Sh mana jirin wax iska badalay qiimahaas illaa laga soo gaaray 14’kii bisha oo qiimaha neefka lo’da ah uu noqday 8,500,000 So.Sh.
Qiimaha neefka lo’da ah ee suuqyada Muqdisho waxba iskama badalin wixii ka dambeeyay 14-kii bisha oo uu noqday 8,500,000 So.Sh
Bishii September ee 2017 qiimaha lagu iibiyo neefka ariga ah ee dalka ayaa ku bilawday 2,500,000 So.Sh.
15’kii September qiimaha neefka ariga ah hoos ayuu u dhacay waxuuna noqday 2,350,000 SOS. Waxii ka dambeeyay 155’kii bisha hal mar kaliya ayuu isbadalay qiimaha la iibiyo neefka ariga ah waxuuna kusoo laabtay qiimahii uu ku bilowday (2,500,000 So.Sh).